Mauro Icardi oo ka jawaab celiyay xiisaha kaga imaanaya kooxda Real Madrid – Gool FM
(Inter) 22 Okt 2018. Weeraryahanka kooxda Inter Milan ee Mauro Icardi ayaa ka hadlay wararka xanta ah ee ku aadan in Real Madrid ay xiiseeneyso inay sameyso saxiixiisa suuqa kala iibsiga ee soo aadan.
Mauro Icardi oo guul ku hogaamiyay kooxdiisa Inter Milan waqtigii dhimashada ee 90-ka daqiiqa ee ciyaarta kulankii Derby di Milano ayaa ka hadlay wararka ku aadan in Real Madrid ay la saxiixan doonto suuqa kala iibsiga ee soo adan wuxuuna yiri.
“Waxaa jira warar badan ee ku aadan kooxda Real Madrid, marka aan la kulano dalabyo ayaan qiimeyn ku sameyn doonaa, balse waan ku faraxsanahay halkan aan joogo ee kooxda Inter Milan”.
“Guushii aan ka gaarnay kulankii Derby di Milano muhiim ayay inoo ahayd, sababtoo ah waxaan si fiican u shaqeynay bishii September”.
“Waxaana dooneynaa inaan sii shaqeyno ka dib kulamadii caalamiga ahaa, islamarkaana aan Barcelona kala hor tagno isla maskaxdan oo kale”.
“Waa inaan sii wadnaa guulaheena, si aan ugu dagaalano ku guuleysiga horyaalka Talyaaniga, Juventus waxay muujisay sanooyinkii lasoo dhaafay sida ay u awoodo inay xili kasta hogaamin karto horyaalka, sidaasi darteed waa inay tusaale inoo noqdaan”.